အိုင်ဗရီကို့စ်: သမ္မတစစ်တိုက်နိုင်ရန်အတွက် Alassane Ouattara ရဲ့စခန်း - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "အိုင်ဗရီကို့စ်: သမ္မတစစ်တိုက်နိုင်ရန်အတွက် Alassane Ouattara ရဲ့စခန်း - JeuneAfrique.com
အိုင်ဗရီကို့စ်: သမ္မတစစ်တိုက်နိုင်ရန်အတွက် Alassane Ouattara ရဲ့စခန်း - JeuneAfrique.com
Ouattara Stade ဖေလဇ်မင်း Houphouet-Boigny မှာ RHDP, ဇန်နဝါရီလ 26 2019 ၏မဲဆန္ဒနယ်ညီလာခံ။ © Thierry Gouégnon / REUTERS
ဤသည်စက်တင်ဘာလစွဲချက်တင်, အ RHDP ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုအကောင်အထည်ဖော်မှုပြီးစီးခဲ့ပါသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်: 2020 သူ့ရဲ့သမ္မတလောင်းများ၏အောင်ပွဲ။ ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘယ်သူတွေနဲ့? စစ်တမ်း။
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ်အိုင်ဗရီကို့စ်သမ္မတ Abidjan လေဆိပ်မှာချဌာနရှိရာကိုအပေါ်မှာကျိန်းဝပ်သောအခါ 16 40 ညနေက, 27 သြဂုတ်လဖြစ်ပါတယ်။ Alassane Ouattara အားလပ်ရက်၏သုံးပတ်အကြာတွင်ပြန်မူလနေရာဖြစ်သည်။ Mougins သူအရမ်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး likes ထားတဲ့ပြင်သစ်၏တောင်ဘက်၌ဤ villa ပုံမှန်ဘန်ဂလိုမှာ, ပြည်နယ်၏ဦးခေါငျးကိုကျောင်းရဲ့ပူပြင်းတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အိုင်ဗရီကို့စ်အတွက်အခွန်သူချက်ချင်းသည်သူ၏ဝန်ကြီးချုပ်ပြော Coulibaly ဂုဏ် Amadouသင်တန်း၏လုပ်ငန်းတာဝန် အသစ်တစ်ခုကိုအစိုးရဘယ်သူ့ဖွဲ့စည်းမှုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ဤသည်အနည်းငယ်ဒီဇိုင်းအသစ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး (RHDP) အတွက်Houphouëtists၏ပြိုင်ပွဲများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်ဇန်နဝါရီလရဲ့အဆုံးမှာထူထောင်သည်စုစည်းပါတီဆောက်လုပ်ဆဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူအာဏာရလာမရောက်မီသူသမ္မတသုံးပြီးသောရုံးများအတွက် Deux Plateaux မှာနေအိမ်သို့ယူကြ၏။ မြင့်မားတဲ့အဖြူရောင်နံရံများကိုအားဖြင့်မျက်စိ prying နှင့်မကြာမီ redeveloped ခံရဖို့မှကာကွယ်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာသက်သေမပါဘဲတစ်ဦးက villa ။ ဇူလိုင်လလယ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောအမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု, ယခုနှင့်တွေ့ဆုံနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ 37 အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောအဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Adama Bictogo, ရီပတ်ဘလစ်ကန်များ၏ပြိုင်ပွဲ (RDR, သမ္မတပါတီ) အတွက်စည်းရုံးခြင်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၌သစ်စာစောငျ့တာဝန်ရှိများကဦးဆောင်သည်။
သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား: ခုနစျပါးကိုဦးစားပေးနယ်ပယ်များတွင်ရွေးကောက်ပွဲများ၏အရေးကိစ္စများကိုနားလည် - JeuneAfrique.com
တူနီးရှား: Hafedh Caid Essebsi သူ၏မိသားစုသည်နှင့်အညီ, ပြင်သစ်၌ခိုလှုံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် - JeuneAfrique.com